Excel template yekushandura kubva kuGeographic Coordinates kuenda kuUTM - Geofumadas
Excel template kutendeuka kubva ku Geographic Coordinates kuenda kuUTM
Kukadzi, 2008 ArchiCAD, Cartography, Downloads
Iyi template inoshandura kutendeuka kwenzvimbo dzinoenderana nemadhigirii, maminitsi nemaminetsi kuhutano hweUTM.
1. Maitiro ekupinda iyo data
Iyo data inofanirwa kugadziriswa mune rakapfuura sheet, nenzira yekuti ivo vanouya mune anodikanwa fomati. Ehe, izvo zvakajairwa kurambidzwa zvine hukama nematanho eanogamuchirwa tsika anofanirwa kuremekedzwa sezvatinotaura apo tinotsanangura majeti eUTM.
Iyo spheroid inosarudzwa muforomu yekuderera
Irosi yekutanga ndiyo yekuisa imwe nhamba
Iyo mikoko inopenya ndeyokupinda munzvimbo dzenharaunda
Nzira mbiri uye urefu hunofanira kuuya nhamba (pasina digiri, maminitsi kana mashizha chiratidzo), uye akaparadzaniswa muzvikamu zvakasiyana, masekondi angangodaro ane zvigaro.
Dhigirii muhurefu haafaniri kusvika ku180
Dhigirii muzvikwiriso haafaniri kusvika ku90
Maminitsi nemaminetsi haafaniri kusvika ku60, nokuti ivo vangave vari chikamu chechipiri chinotevera
The East / West inofanira kunge iri "E" kana "W", yepamusoro
Maodzanyemba / Maodzanyemba anofanirwa kunge ari "N" kana an "S", ekumusoro
Kana iwe uchikwanisa kuzvigadzirira mune imwe peji yakakurumbira, nezvozviitiko iwe uchafanira kungoita kopi / paste
2 Zvabuda zvinoguma
Ihurukuro iri muhombe iUTM inogadzirisa, maererano ne spheroid yakasarudzwa, kuwedzera nzvimbo yacho inoratidzwa.
3. Maitiro ekuvatumira kuAutoCAD
Ikopi yepamusoro iyo UTM inoronga kuitira kuti ugovatumira kuAccAD sezvazvakangoita tinotsanangura mune imwe nyaya. Kutumira kubva kuExcel UTM kuenda kuGoogle Earth ona iyi imwe nyaya.
Dzokororai, uye ripoti chero matambudziko
Iyi template yekushandura Geographical mazano kusvika kuUTM.
Unogona kuitenga nayo Kadhi kadikiti kana Paypal.
Icho chinomiririra kana mumwe achifunga nezvekubatsira kwaanoita uye nyore nyore kwaanogona kuwana.
Dzidza maitiro ekugadzira izvi nemamwe matemplate mu Excel-CAD-GIS kubiridzira.
Coupons Office kuti zvinouraya
Previous Post«Previous Nzira yekugadzira gurani rekodzero
Next Post Shandura UTM kune Geographic Coordinates ne ExcelNext »
51 Inopindura ku "Excel Template Kuti Uchinje kubva kuGeographic Coordinates kuenda kuUTM"
Nyora meseji kune iyo email yakasvika iwe pawakatenga, kuitira kuti ivo vatumire template iyo isiri chete inotsigira kurongedza mumadhigiri, maminetsi uye masekondi asiwo mune decimals.
Ndakatenga template yekushandura geographical kuUTM. Mubvunzo wangu ndewekuti: ndingaite sei kuisa maidenografiti enzvimbo?
Sezviri pachena iyo template haisi kuvaziva, nekuti inoratidza imwe UTM spindle (zone).
mupiro wakanaka chaizvo
Asi iwe unofanira kutarisira, kuti data yako ine:
iyo comma seyakaparadzanisa zviuru, saka iri: -56.514,707 -12.734,156
Chengetedza kana iwe unogona kuchinja iyo munzvimbo dzako dzemo.
Kana iwe uchida kuyedza usati watenga, tumira muenzaniso wedata mune yepamusoro, kune tsamba yekunyora (@) geofumadas. com
Ichi chirongwa chinoshandura Geographic Coordinate (Grau Decimal) muUTM mumamita
Miguel Navarrete inoti:
Ndatenda kwazvo, ini ndatova neiyo template, mumwe chete mubvunzo, kunyangwe ini ndatoverenga chinyorwa chekuti template inoshanda sei uye chii chinoreva kuUTM zvinongedzo, kana ndiri muYucatan Peninsula uye ndine inotevera poindi N 20 - 26 - 31.5 W 90 - 01 - 42.5, sezvandinoita kana izvo zvikwangwani zvichiti nzvimbo dzenzvimbo hadzigone kusvika pamadhigirii makumi mapfumbamwe, ndingafarire rubatsiro rwenyu
Nezuro husiku yakatumirwa kwauri, kune iyo tsamba miguel.manamond ...
Isu takaendesa kumberi kune ino miguel.navarrete ...
Kana iwe uine kusava nechokwadi, tiudzei.
Hello zuva rakanaka rokupedzisira usiku mari Via paypal Excel template kutendeutsa Geographic coordinates kuti UTM, asi kwete dhanilodhi kubatana, ndine kutengeserana ID kana zvakakodzera ndasvika, ndichava kuziva mhinduro kwaziso
Ndakatumira tsamba yekutsvaga link.
Chero dambudziko iwe unondiudza.
Rafael Gallardo López. inoti:
Ini ndakabhadhara nePayPal uye ini handisi kuona chero sarudzo yekutsvaga paRispal risiti.
Kubhadhara iyo 13 yaJuly ye2.017. 08: 59: 22 GMT + 02: 00.
Ndapota ndiudzei kuti mungatora sei faira.
kuenda kubva inegumi, maminitsi nemasekonzi kuti madhigirii uye decimals, ukamure maminitsi nemasekonzi 60 3600, pamusoro grade inopfupikisa tsika idzi Graos rombo.
Iwe unogona kuita peperesheet pane zvekare.
Ángel Vilches inoti:
Gumiguru, 2014 pa
Kutanga, ndinokutendai nekugovana ruzivo rwenyu.
Rechipiri: Ini ndakaburitsa geographic Exel kuUTM, asi ndinofanira kuziva kuti ndepapi yandiri kushandisa kuBrazil, kana tsananguro yani yekushandisa nzvimbo dzakasiyana.
tsanangudzo yakanaka kwazvo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
Iyo template inobva Geograficas kusvika kuUTM
Gumiguru, 2012 pa
Tarisa iyo email, dzimwe nguva inoenda kune spam. Asi kana chete kubhadhara kwaitwa iwe uchagamuchira iyo PayPal risiti uye email ine kurodha ulr.
Jose Antonio inoti:
Wakaita kubhadhara, inobudiswa sei?
jose matzar inoti:
gadzira denderedzwa 1.00 pakadzika wobva wasarudza denderedzwa mushure mekupinda yako UTM kuronga wozoisa kiyi yekupinda ipapo tsamba z wobva watora tsamba E wobva wapinda uye otomatiki unowana yako UTM kuronga nzvimbo, ita bvunzo wobva wandiudza.
Kuti ushande UTM munzvimbo inoshanduka nzvimbo, unofanirwa kuchinja shanduko, kuitira kuti nzvimbo yako iwedzere.
Kana kuti shanda mumamiriro ekugadzirira.
Sawa, zvakanaka masikati. Mubvunzo wangu ndouyu: Ndingaitei kana ndichipinda mumitemo yekuti uite kuti iwe usakwanisa kuratidzira dunhu raunotyaira? Ini ndatove nemakorodzano muUTM asi autocad haina kutarisira (kana ini handina kuwana nzira yekushandura nayo) nzvimbo. Muenzaniso paunopinda mahofisi eUTM munharaunda ye15 handina dambudziko, asi pandinopinda mu16 munharaunda ini handisiisi munzvimbo inoda.
Ndinotenda muna Advance
Tarisa papepa re spam, nguva dzose nekutengesa uye paypal risiti inodzorera url download.
Ndakanga ndatobhadharira paypal uye hapana chakakonzerwa .. iwe unogona kutumira kune tsamba yangu?
Ndakanga ndatozvibhadharira uye handina kutora chero chii .. chii chandinoita?
Pane bhatani bhatani rinoti "Rodha"
yakanaka kwazvo yako positi pane kwandinogona kurodha iyo fomati mune exc
zvakanaka kwazvo mipiro yekuisa pamwechete paseji izere yeruzivo neruzivo
Francisco Hernández inoti:
Ndinotenda nekuda kwekushamwaridzana kwemashoko. Dzidzo, kushandiswa kwakakodzera uye kutungamirirwa kwemashoko ndiyo zvombo zvakanakisisa zvinopesana nekudziviswa uye kutonga.
geofumadas kumutungamiriri wenyika
Svondo, 2011 pa
Ini handizive iyo yekusara, asi chinoburukira kwandiri ibepa rine data mune iro formula chete ndeyekuwedzera nhamba yakatemerwa kune data rekare "rakaverengerwa" kuronga. Iyo haina tsoka kana musoro, mumaonero angu. Kana waigona kuongorora kunze.
stop pines inoti:
chakanakisisa kuvonga mupiro mazvita friend'm basa rokudzimura moto uye vanhu vava kushandisa GPS mafoni zvandinoda kuti kana munhu reorta sezvarasika pamusoro foni yangu kukarukureta uye mumasekonzi vane UTM rinoronga kuti kutsvaka pamwe kwakajairika browsers uye ari Laptop munoziva pakarepo kuti munhu kwemauto uye nokudaro ugopfiga denderedzwa kutsvaka
Sawa, ndakawana mashoko anofadza pamusoro pefaira rekuwedzera file-extensions.org.
Jo, zvechokwadi ndine bhuku pachako nzvimbo chinyorwa yangu. Pamusana Blog renyu I yakawana pasi nzvimbo umo shp mafaira pamusoro Honduras, uye ikozvino ndaifanira kuenda UTM anoona kubudisa marongera muna Quantum GIS, chipande yako yave chaizvo rubatsiro.
Ndinoda kuona kuti ndiri kushandisa Linux uye OpenOffice 3.0, uye kwako tangazve kutendeuka anoshanda kudada Calc. No ndakakwanisa kutevedzera faira igarwe csv format, asi asina mhosva zvachose, nokuti havana dzakawanda pfungwa, saka ndakanga zvakakwana kuzviita manually, uye kumativi nhamba, nokuti jenareta rukoko Quantum anoita haritsigiri decimals.
Chero zvazviri, bhaibheri rako ibatsiro rinokosha kune vanhu vakaita seni, vanobva pamakamba, asi avo vane chido chokupinda munyika yenyika yekuziva maitiro.
Ini handikupe chiuru chekutenda, nekuti kumusoro kumusoro ivo vakatoita ...
Kuti udzoke iwe unogona kushandisa
Kwaziso dzeCordial uye ini ndinogona chete kukutendai nekuda kwezvakasiyana zvipo zvamunoita pano; Kunyanya, iyo "misa" kushandurwa kwemarongerwe kwave kuchinyanyobatsira. Mubvunzo mumwechete: zvingave sei kutora chikamu chako chekushandura mugwaro rako?
Alejandro Vilchis inoti:
Congratulations galvarezhn, Ndinowana nzvimbo yako inonakidza uye ndave ndisina basa. Ndinokutendai
Kupfuudza maDhigiri kuna Degrees maminiti nemasekondi:
Nhai, izvi ndizvo zvakanakisisa, mumwe munhu anoziva zvakanakisisa asi kuti achinje digrii maminetsi mashomanana mumadhigirii? kuvonga zvisati zvaitika
Excellent contribution !! Inofanirwa kugoverana rudzi urwu rwemashoko.
San Renato inoti:
Hei ... ndanga ndichiita ongororo neGPS asi nekuda kwe "technical memory" zvikonzero (ini ndakakanganwa tambo yeantena) ini handina kukwanisa kupedzisa ongororo yangu uye ndakazviita nemufambisi wengarava ... uye ndaisaziva maitiro ekushandura marongedzo ... kumhanya kwakanaka ... kukuru !!!!
iwe unofanirwa kutevedzera iyo yose yakakwana pasi,
inodurura mitsetse nemiti isingaoneki uye inopikisa penultimate row iro pasi
zvakanaka kwazvo uye zvinoshanda, maita basa! kunyangwe zvakadaro ndine dambudziko diki, zvekuita kana ndave neanoda kusvika zviuru zvisere zvezviumbiridzo zvekushandura ...? -kugona kunongobvumira 8000… - Ndakaedza kudhonza mafomura asi hazvishande.
Zviri nyore, zvinokurumidza, zvinowanika, handizivi chimwe chaunogona kukumbira.
Ndinotenda nekuda kwekubatanidza utm kune geographies, mune iyo yepamusoro pepa inouya zvandinoda kubva kune digiri.
Chimwe rubatsiro kana iwe ukwanisa kundipa ndechokuti kune pepa rakanakisa rekutendeuka kubva kune tme kusvika kune rimwe, uye pamwe chete. thank you
Hi David, Iyi chinyorwa Iine pepa rakanakisa rinopesana naro, kubva pa utm kusvika kune imwe nzvimbo.
Nezve kugadzira peji rinoshandura madimikira kuva madhigirii, maminetsi nemasekondi ... pamwe rimwe remazuva ano ndichagara pasi kuti ndiite
Basa rakanaka kwazvo !! Makorokoto. Ini ndinoshandawo nerudzi urwu rwekutendeuka, kubva ku utm kuenda ku tme, tme kuenda ku utm uye ma geodeics uye zvese izvo zvingatendeuka, ndinoshandisa chirongwa che TMCalc, uye chinoshanda kwandiri, asi dzimwe nguva kuva nepepa rakapfuura kuita shanduko kwete chirongwa ichi, kana mumwe munhu aine kubva kuUTM kuenda kuGeodeics mukugona angave mupiro mukuru kwandiri ...
Chinangwa changu chikuru chaive chekutsvaga iri peji. Iri pepa rakapfuura rinondipfuudza madhigirii madhimoni (45.7625 degrees) kusvika pamadhigri maminetsi nemasekondi (45 "45" 45.000 "), unogona here kundibatsira, urombo kana ino isiri forum .. yangu email iri ingdvd1@hotmail.com
María Alonzo inoti:
Kungokutendai nokuda kwemashoko acho, zvave zvichibatsira zvikuru, faira yacho yakanakisisa.
ZVAKANAKA NDI KUZIDZIDZA KUTAURA ZVAKAITIKA PANGUI YANGU IYE NDINOGONA KUBATSIRA KUBATSIRA ZVINHU ZVOSE
Ulises Urcid Beez inoti:
Zvakanaka, ndinokuvongai zvikuru.
ZVINOKOSHA… HAZVITIPI ZVIMWE .. NDATENDA .. RINO FILE…
Mafashamo Emodeling Kosi - HEC-RAS kubva pakutanga
Nzira uye kuongorora kwemafashama ne software yemahara: HEC-RAS HEC-RAS chirongwa chemauto eArmic Corps of MaNjiniya ...